Bogga ugu weyn Waa maxay Securities in Finance? Guudmarka iyo Sida ay u Shaqeyso
Isha sawirka: maverick-specter
Damaanad -qaadyada maaliyaddu waa aalad u adeegta ilaha maaliyadeed ee kaaliyaha iyo halista u ah iibsadaha hanti. Dhab ahaantii waa wax qiimo weyn leh oo laga yaabo inay ka ganacsadaan dhinacyada.
Waxay la macaamili karaan lahaanshaha qofka ammanka ah, xaqa lahaanshaha gaarka ah, ama gaadiidka amaahda.
Waa maxay Securities in Finance?
Damaanad -qaadyada maaliyaddu waa kheyraad qiimo leh oo lagu beddeli karo kheyraadka isbarbar -socda ee fiirinta. Waxay yihiin kuwo la aqbali karo oo lagu beddeli karo ilo la mid ah.
Tani waxay sidoo kale ka caawisaa nidaamka ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, dhowr damaanad oo aan la beddeli karin maaddaama ay ku kala duwan yihiin samaynta iyo astaanta. Xaq u lahaanshaha lahaanshaha waxaa sidoo kale wax ka qaban kara amniga maaddaama Guddiga Sicirka iyo Sarrifka (SEC) ay iyaga ka nidaamiyaan Mareykanka.
Noocyada Sugnaanta ee Maaliyadda
Damaanad -qaadyada deynta, dammaanadaha sinnaanta, iyo soo -saarka ayaa ah saddexda nooc ee aasaasiga ah ee dammaanadda.
#1. Deynta Deynta
Nabadgelyada wax ka qabata lacag caddaan ah oo ganacsadaha ammaanku ka helo iibsadaha amniga ayaa loo yaqaanaa deynta deynta. Ganacsaduhu waa inuu u soo celiyaa macaamilka lacagtan muddo wakhti ah, oo lagu daray dulsaar.
Damaanadaha deynta ayaa sida caadiga ah la siiyaa si loo horumariyo hantida shirkadda. Marka ugu horreysa ee shirkaddu bilaabanto, waxay lacag ka amaahan doontaa bangiga. Bangiyadu waxay kaliya amaahin doonaan lacag ilaa xad gaar ah 'maadaama ay kaliya la qaadan karaan qaddar halis ah shirkad cusub.
Marka urur ka helo dhammaan maaliyadaha uu u baahan yahay bangiga, wuxuu soo saaraa dammaanad suuqa suuqa.
Markaad iibsato damaanad, waxaad si wax ku ool ah ugu xisaabinaysaa dhaqaalahaaga ururka. Curaarta ayaa la bixiyaa wakhti macquul ah. Ururku wuxuu kaa magdhabayaa debaajiga isagoo ku bixinaya dulsaar aan joogto ahayn.
Sidaas darteed, ururku wuxuu dhaqaale ka helaa dadweynaha wuxuuna soo celiyaa markay macaash abuuraan. Qaybahan aan joogtada ahayn waxaa loo yaqaanaa qaybo kuuban, waxaana caadi ahaan loo qaybiyaa laba jeer sannadkii.
la xiriira: Sida loo helo Xidhmada Ardayga ee xafiiska Microsoft
#2. Ammaanka Sinnaanta
Sinnaanta waxay ka hadlaysaa lahaanshaha. Markay shirkaddu u baahan tahay inay ballaariso hawlaheeda, waxay ka iibisaa qaybo ka mid ah shirkadda adduunka dibedda. Saamiyada waxaa loo iibsan karaa saamiyada caadiga ah ama saamiyada la doorbiday.
Markay taageere maaliyadeed iibsato saamiyo, waxay iibsadaan qayb ka mid ah waajibaadka shirkadda, taas oo milkiilaha xaq u siisa faa'iidada ama khasaaraha shirkadda. Haddii shirkaddu macaash hesho, waxay u diri doontaa maalgashadaha saddexdii biloodba macaash ahaan ama waxay u adeegsan doontaa inay ballaariso shirkadda.
Kuwa dambe, maalgashaduhu wuxuu arki doonaa maalgashigooda oo qiimaynaya qiimihiisana loo iibin doono macaash. Hantida ayaa sidoo kale leh abaalmarino waaweyn maxaa yeelay waxay ku xiran yihiin guusha shirkadda sidaas darteedna waxay leeyihiin halis sare oo ah inay lacag waayaan. Qiimaha saamiyada ayaa kor u kaca oo hoos u dhiga macaashka shirkadda.
#3. Kala -soocyada
Kala -soociddu waa aalad maaliyadeed oo qiimaheeda lagu go'aamiyo qiimaha hanti gaar ah ama koox hanti, saamiyo, badeecad, lacag, dulsaar, ama dammaanad maaliyadeed oo kale.
Badanaa waa heshiis u dhexeeya laba dhinac oo ku saabsan iibsashada ama iibinta hal hanti ama koox hanti ah.
Shakhsiyaadka iyo hay'adaha ayaa si isdaba joog ah u adeegsada dariiqooyin si ay u yareeyaan halista, laakiin waxay sidoo kale u shaqaalayn karaan si maldahan maalgashadayaasha si ay lacag u helaan.
Heshiiska mustaqbalka, tusaale ahaan, waa heshiis ah in lagu iibsado ama lagu iibiyo shay qiimo cayiman taariikhda mustaqbalka la cayimay.
Soo -saareyaashu way ka qaalisan yihiin hantida hoose laakiin waxay ku siinayaan awood aad ku dul -saarto kharash yar.
#4. Securities Hybrid
Dhinacyada qaarkood, dammaanadaha isku -dhafan waxay u dhaqmaan sida aaladaha deynta, laakiin kuwa kale, waxay u dhaqmaan sida dammaanadaha sinnaanta. Xiriirada la beddeli karo ayaa ah amniga isku -dhafan ee ugu badan.
Kuwani waxay la mid yihiin curaarta oo ah inay si joogto ah u bixiyaan, laakiin sidoo kale waxaa loo rogi karaa tiro cayiman oo saamiyada saamiyada ah marka la haysto qofka haysta.
Dammaanadda sinnaanta, tusaale ahaan, waa ikhtiyaar toos ah oo ay shirkad siiso saamileyda si ay ugu iibsadaan ama ugu iibiyaan amniga qiimo go'an ama ka hor taariikh cayiman.
Waxaad kaloo arki kartaa: Miisaaniyadaha Vanguard ee ugu Fiican | Ma u qalantaa lacagtaada
Sidee Suuqyada Maaliyadeed looga ganacsadaa? Sida ay u shaqayso
Is -weydaarsiyada saamiyada sida NASDAQ iyo New York Stock Exchange waxay u oggolaanaysaa maalgashadayaasha inay iibsadaan dammaanad si guud looga ganacsado. Maalgashadayaashu waxay si toos ah uga iibsan karaan dammaanadaha soo -saaraha haddii saamiyada aan lagu qorin mid ka mid ah is -weydaarsiyada waaweyn.
Tan waxaa loo yaqaanaa ganacsi-ka-iibsasho-la'aan. Guddiga Sicir -bararka iyo Sarrifka ayaa nidaamiya suuq -geynta suuq -geynta waxayna ka ilaaliyaan maalgashadayaasha inay is -daba -mariyaan suuqa saamiyada ee Mareykanka.
Maalgashadayaashu waxay ka iibsan karaan oo ku iibin karaan hantida suuqa sare kadib markii shirkaddu bixisay bilowga dadweynaha (IPO). Maalgashadayaasha cusubi waxay kaliya ka iibsan karaan dammaanad saamilayda hadda suuqa labaad.
Saamile -yaasha hadda waxay ka iibiyaan maalgashigooda maalgashadeyaasha kale, si ku habboon macaash, taas oo macnaheedu yahay inay hantidooda ku iibiyaan qiimo ka sarreeya intii ay ku bixiyeen.
Maxay u eg tahay Maalgelinta Sicir -bararka ee Maaliyaddu?
Soo -saaraha ayaa ah hay'adda samaysa dammaanadaha iibka, iyo iibsadayaashu, dabcan, maalgashadayaal. Sicir -bararku waa nooc ka mid ah maal -gashiga iyo dariiqa magaalooyinka, meheradaha, iyo hay'adaha kale ee ganacsi si kor loogu qaado raasamaal cusub.
Bixinta dammaanadda dowladda hoose waxay u oggolaaneysaa magaalada, gobolka, ama dowladda gobolka inay aruuriyaan maalgelinta mashruuc gaar ah. Iyada oo ku xidhan baahida suuqa ama qaab dhismeedka qiimeynta ee hay'ad, kor u qaadista raasumaalka iyada oo loo marayo damaanad ayaa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaar ka fiican qaadashada deynta bangiga.
Iibsashada hantida oo leh lacago la amaahday, hab -dhaqameedka loo yaqaan iibsashada marinka, waa istaraatijiyad maalgashi oo caadi ah.
Nuxur ahaan, shirkaddu waxay ku wareejin kartaa xuquuqda hantida qaab lacag caddaan ah ama dammaanado kale si ay u dejiso deyn ama waajibaad kale oo loo diro hay'ad kale, ha ahaato bilowgii ama ha ahaato.
Noocyada qabanqaabada dammaanadda ayaa si isa soo taraysa caan u ahaa sannadihii la soo dhaafay, gaar ahaan maalgashadayaasha hay'adaha.
Waxaad kaloo ubaahan kartaa inaad aragto: 10 Maaliyadood ee Qaybinta ugu Fiican Sanadka 2021
Securities ee Xeerka Maaliyadda
Guddiga Sicirka iyo Sarrifka (SEC) wuxuu kormeeraa bixinta dadweynaha iyo iibinta dammaanadaha ee Mareykanka.
Soo -bandhigyada amniga, iibinta, iyo is -weydaarsiga ee Mareykanka waa in la diiwaangeliyaa oo lala socodsiiyaa waaxaha amniga gobolka ee Guddiga Sicirrada iyo Sarrifka.
Mas'uuliyadaha sharciyeynta waxaa si joogto ah u qaata ururada iskood u maamula (SROs) ee warshadaha dilaalka. Ururka Qaranka ee Ganacsatada Suuqyada (NASD) iyo Hay'adda Xisaabinta Warshadaha Maaliyadeed ayaa ah laba tusaale oo SROs (FINRA).
Ma Jiraan Noocyada Kale ee Damaanad -qaadka Maaliyadda?
Haa, waxaa jira noocyo kale. Fiiri.
Securities la xaqiijiyay: waxay ku matalaan qaab shay muuqaal ah, sida warqad. Nidaamka diiwaangelinta tooska ah, oo diiwaangeliya saamiyada ku jira foomka gelitaanka buugga, ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu haysto dammaanad. Si kale haddii loo dhigo, wakiilka wareejintu wuxuu hayaa saamiyada isagoo wakiil ka ah shirkadda iyadoon loo baahnayn shahaadooyin dhab ah.
Securities -ka xambaarsan. Waxay ka gudbaan hal maalgeliye ilaa kan xiga, marmarka qaarkood iyada oo loo marayo oggolaansho iyo gaarsiin. Dammaanad-qaadayaasha elektiroonigga ka hor ayaa had iyo jeer loo kala qaybin jiray xagga dabeecadda lahaanshaha, taas oo tilmaamaysa in amni kasta uu ahaa hanti gaar ah, oo sharci ahaan ka duwan kuwa kale ee isla arrintaas.
Securities -ka Diiwaangashan. Waxay ka gudbaan hal maalgeliye ilaa kan xiga, marmarka qaarkood iyada oo loo marayo oggolaansho iyo gaarsiin. Dammaanad-qaadayaasha elektiroonigga ka hor ayaa had iyo jeer loo kala qaybin jiray xagga dabeecadda lahaanshaha, taas oo tilmaamaysa in amni kasta uu ahaa hanti gaar ah, oo sharci ahaan ka duwan kuwa kale ee isla arrintaas.
Damaanad-qaadyada maaliyaddu waa hababka lacag-ururinta, samaynta hawl-maalmeedyo dheer ama ku-meel-gaadh ah, ama lahaansho ama xaq u lahaanshaha lahaanshaha urur ama shirkad.
Waxaa lagu iibin karaa iyada oo aan sharciyeysnayn waaxyaha ganacsiga ee miiska laga soo iibsado ama goob la kontoroolo sida ganacsiga saamiyada iyo debaajiga. Waxaad u adeegsan kartaa wakiil si aad u iibsato ama adiga ayaa sidoo kale ka heli kara internetka.
Shabakadaha Ijaarka ee ugu Fiican Ugaarsadayaasha Guryaha
15 Saami Qaybsiga Waxsoosaarka Sare Waa inaad iibsataa 2021
Miyaan ku maal galiyaa 401k? Maxay tahay inaan ogaado 2022
Kaydinta hawlgabku waa wax xikmad leh in la sameeyo intaad weli shaqaynayso. Shaqaalaha cusub badankood waxay u maleeyaan that
Maxaan Ku Sameeyaa Lacagtayda? 10 Fursado Maalgashi oo Cusub sanadka 2022
Su'aashu weli way taagan tahay, maxaan ku sameeyaa lacagtaada? Jawaabtu asal ahaan waa farqiga u dhexeeya…
25 Kayd ee ugu Wanaagsan ee Maanta la Iibsan Karo | Tusaha Maalgashiga
Iyada oo kayd dinaar ah, waxaad ku dhufan kartaa Ghanna. Caqabadda jirta ayaa ah sidee ku ogaan doontaa faa'iidada sare leh…
Sida lacag loogu sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah sannadka 2022: Hacks buuxa
Ikhtiyaarada binary waxay ku siinayaan raaxada ah inaad ka soo qaadato laba ikhtiyaar oo badan; qaddar go'an ama…
Waa maxay ROTH IRA sideese u shaqeysaa?
Adduunka ikhtiyaarada maalgashiga hawlgabka, waxa jira hal qorshe kayd ah oo ka taagan madaxa iyo garbaha ka sarreeya…
Waa maxay Kaarka Debit iyo sidee buu u shaqeeyaa?
Sida Loo Sameeyo Kadhka Debit
Dib u eegisyada Kaarka Debit ee Greenlight: Ma ku habboon tahay Carruurtaada?
Sida Loo Bixiyo Lacag Lagu Qorayo 2022